Wasaaradda Waxbarashada: Dalladuhu waa hogaamiye kooxeedyo waxbarasho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaaradda Waxbarashada: Dalladuhu waa hogaamiye kooxeedyo waxbarasho
3rd June 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya ayaa madaxda dalladaha Waxbarashada ku tilmaamtay iney yihii Hogaamiye Kooxeedyo Waxbarasho. Arrintaan ka dambeysay markii wasaaradda iyo dalladuhu isku afgaran waayeen in la qaado imtixaan mideysan oo ka dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka wasaarada waxbarshada, Xaamud Cali Xasan oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray mas’uuliyiinta daladaha oo uu sheegay iney dayaacayado ka fidinayaan dowladda Soomaaliya, waxaana uu u soo jeediyay in ay wasaarada kala shaqeeyaan qabsoomida imtixaanka oo 13 bishaan loo madalsan yahay in la qabto.
“Hugaamiye kooxeedyada waxbarasho ama hugaamiye kooxeedyada qalinka waxaan u sheegeynaa in ay iyaguna socon doonaan oo ay u dhamaa doonto waayo maanta ifbaa baxayo, iftiinbaa noo baxaya in burburkii laga soo kabanayaa muuqata cid walba oo aqoonyahan iyo waxgarad ah wuu arkayaa marka waxaan rabnaa in aan la is dacaayadeyn, suuqaqa dacaayadaha ku jira ambalaasyaa la keenayaa, xalanaa imtixaan lagu qaadayaa, ardaybaa la laayay, waxaasoo dhan wax jira ma jiro” ayuu wasiir ku xigeen Xaamud Cali Xasan.
Agaasimaha guud ee wasaaradaasi, Maxamed Cabdulqaadir Nuur ayaa waxaa uu sheegay in mudo 3 sano ah ay wasaarada iyo dalladuhu ka wada shaqeynayeen suura galnimada in la qaado imtixaan mideysan ayna ku heshiiyeen arrintaas, hadalka daladaha ka soo yeerayna uu yahay mid marin habaabin ah.
“Su’aasha ah wasaarada iyo daladaha waxba iskuma ogeyn way isku ogayeen labo maraa heshiis dhacay qoraal ah marna la saxiixay marna gudi lagu heshiiyoo la soo saaraa dhacay oo sadax iyo toban qodob ka kooban iyo gudigu howshuu qabtay in joogay uusan kala tagu dhicin barnaamijyadii gudigu lagu shaqeyn lahaayeen sameestay iyo xeerarkii kuli waa la samestay marka waxaan rabaa taqriiban in aan intaas ku soo koobo” ayuu yiri agaasimaha.
Khilaafka u dhaxeeya Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya ayaa qaadacay imtixaan ay wasaaradda waxbarashadu ku dhawaaqday in arydayda Form4 laga qaadayo 30-kii bishii Hore ee May, balse dib koo dhigay lana sheegay in la qaadayo 13-ka June 2015.
AMISOM oo madaafiic ku garaacday deegaan ka tirsan degmada Mahadaay